Sakanan’i Arabia Saodita Ny Rindrambaiko Viber Fandefasana Hafatra Eo Noho Eo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Jona 2013 22:30 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Español, English, Français, македонски, Italiano, English
Araka ilay fandrahonan'ny Saodiana hanakana ny rindrambaiko fifandraisana mirakitra isa (fanafenana hafatra) raha tsy avela hanara-maso ny governemanta, voasakana ilay rindrambaiko fandefasana hafatra eo noho eo ny 5 Jona 2013. Tsy afaka hidirana intsony ny vohikala ary tsy mety mifandray amin'ny aterineto ilay rindrambaiko.
Io fanakanana io dia natao taorian'ny fe-potoana napetraky ny Kômision'ny Fifandraisana sy ny Teknolojian'ny Fampahalalam-baovao Saodiana. Hatramin'izay, farafahakeliny orinasam-pifandraisana iray no tratra niezaka hamaha ilay fomba fanafenana mba ho fampiharana ny fampanarahan-dàlanan'ny governemanta. Nanonona ny Skype sy ny Whatapps ho mpandika io fampanarahan-dalàna io ihany koa ilay fandrahonana teo aloha.
Maro no niampanga io fanapahan-kevitra io ao amin'ny tontolon'ny Twitter Saodiana.
Nitoraka bitsika ilay mpisolovava momba ny Zon'olombelona, Abulaziz al-Hussan [ar]:
إذا حجب الإنسان فكل شيء بعده تبعاً …!
@AHussan: Raha voasakana ny olombelona, hanaraka ny hafa rehetra.
Nihevitra ny mpitoraka bilaogy Essam al-Zamil fa fanandramana fotsiny izany:
يبدو أن هيئة الاتصالات (والداخلية) اختارت البرنامج الأقل انتشارا (فايبر) لمعرفة ردة فعل الناس تجاه الحجب.
@essamz: Raha ny tsikaritra, nisafidy ny vohikala tsy malaza indrindra ny Kômision'ny Fifandraisana (sy ny [Minisitry] ny Atitany) mba hitsapàna ny fihetseham-pon'ny vahoaka manoloana ilay fanakanana.
Nanome tsiny ireo orinasam-pifandraisana noho ny fandraisan'izy ireo anjara anatin'ilay fanakanana kosa ny hafa:
بإمكان تكونوا صريحين مع المُتلقي وتقولون أن السبب هو ماتتكبده شركات الإتصالات من خسائر فادحة جراء تواجد هذه البرامج!
@mo3tem: Afaka mitsotra amin'ny vahoaka ianareo ary milaza fa ny antony dia ny faty antoka goavan'ireo orinasam-pifandraisana noho ireo rindrambaiko ireo.
Nanomana lisitranà rindrambaiko tsy voasakana (hatreto) ho solony ny vohikala momba ny teknolojia iray malaza, ny Technology World:
بعد إيقاف تطبيق فايبر، هنا مجموعة من البدائل
techwd: Aorian'ilay fanakanana ny Viber blockage, ito misy lisitranà rindrambaiko hafa azo ampiasaina.